Xiddigihii hore ee Arsenal Adebayor iyo Flamini oo qarka u saaran inay ku wada biiraan… – Gool FM
Byare August 21, 2016
(Engaland) 21 Agoosto 2016. Xiddigihii hore ee Weerarka iyo qadka dhexe naadiga Arsenal Emmanuel Adebayor iyo Mathieu Flamini ayaa qarka u saaran inay ku biiraan kooxda Caykur Rizespor ee ka dhisan dalka Turkiga.
Labada xiddig ayaa kula biiri doona kooxdan goolhayaha Liverpool Charles Itandje waliba heshiiska xorta ah kaddib labada laacib oo aysan heshiiska u kordhin doonin kooxahooda Arsenal iyo Crystal Palace.
“Heshiis mabda’ ahaan ayaan la gaarnay labada ciyaaryahan,” tababaraha naadiga Caykur Rizespor ee Hikmet Karaman ayaa sidaa u sheegay Anadolu Agency.
“Waxay imaan doonaan Rize maalmaha yar ee soo socda gudahood talaabada ugu dambeysa ee wada hadalada ayaa ku socota in la soo af jaro.
Caykur Rizespor ayaa sabtidii ciyaartay kulankeeda furitaanka ee Turkish Super Lig ee xilli ciyaareedka cusub iyadoo bar-baro 1-1 la gashay Konyaspor.
Arsene Wenger oo xaqiijiyay inay wada hadalo kula jiraan Shkodran Mustafi